ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီးတွင် အရှိန်ထိန်းတိုင်းစက် တပ်မည် | ဧရာဝတီ
မေစစ်ပိုင်| September 6, 2012 | Hits:3,128
| | အရှိန်ထိန်းတိုင်းစက် စမ်းသပ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သတ်မှတ်အရှိန်ထက် ပိုမိုမောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များကို မောင်းနှင်သွားသည့် အချိန်၊ မောင်းနှင်သွားသည့် အရှိန်နှုန်း၊ GPS တည်နေရာတို့ကို အရှိန်ထိန်း တိုင်းတာမည့် စက်ကိရိယာကို တပ်ဆင်သွားမည်ဟု အမြန်လမ်းမကြီး ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး နေဝင်းက ပြောသည်။
အရှိန်ထိန်းတိုင်းစက်သည် အရှိန်နှုန်း ၄၀၀ ကီလိုမီတာအထိ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး ရေဒါစနစ် ပါဝင်ကြောင်း၊ လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မိုင်နှုန်းပိုမို မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်၏ နံပါတ်ပြား၊ ယာဉ်ပုံစံ၊ ယာဉ်မောင်းသူပုံစံတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေက သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုမောင်းနေလို့ ကြပ်မတ်ဖို့ လိုလာတယ်။ ဒါကြောင့် အရှိန်တိုင်းတာမယ့် ကိရိယာကို တပ်ဆင်ပြီး လမ်းအသုံးပြုသူတွေ သတ်မှတ်ရှိန်ထက် ပိုမောင်းနှင်ရင် မှတ်တမ်းတင်မယ်၊ ပြီးတော့ အမြန်လမ်း ဥပဒေအရ အရေးယူမယ်” ဟု ရဲမှူးကြီး နေဝင်းက ဆိုသည်။
ယင်းကိရိယာ၏ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ သောင်း ရှိကြောင်း၊ လတ်တလောတွင် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်မလမ်းမကြီးပေါ်၌ ၂ လုံး စတင် တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးအရ ထားရှိမည့်နေရာကိုမှု ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
“မိုဘိုင်းရေဒါစနစ်နဲ့ လုပ်ထားတာကြောင့် လွဲမှားနိုင်ခြေက ၁ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်။ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ကားက ငြင်းလို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ပြောရဆိုရတာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့က ရှင်းပေးမယ်” ဟု ယင်းကိရိယာအတွက် အရှေ့တောင်အာရှ တာဝန်ခံ မစ္စတာ ကူးမားရက်ရ်ှက ပြောသည်။
အရှိန်ထိန်းတိုင်းကိရိယာသည် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းလာသော ယာဉ်တစီး၏ အရှိန်နှုန်းထားကို မိုဘိုင်းစနစ် GPS အရ ကား၏ ၂၂ ဒီဂရီအနေအထားမှ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း တင်မည်ဖြစ်သည်။ ညဘက်တွင် မောင်းနှင်သောကားများကိုလည်း အလားတူနည်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ကာ အရေးယူသွားမည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အရှိန်ထိန်းတိုင်းကိရိယာကို အမြန်လမ်းမကြီးနှင့်ဆိုင်သည့် ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့သို့ တင်ပြကာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဘတ်ဂျက်ဖြင့် အသုံးပြုသည်ဟု သိရှိရသည်။
ယင်းကိရိယာကို လက်ရှိ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအပါအ၀င် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုများအတွက် အလုံးရေ ၂၅၀၀ ကျော် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အရက်သေစာသောက်စား မူးယစ်မောင်းနှင်မှုကိုလည်း အရက်မူးတိုင်း စက်ကိရိယာဖြင့် အသုံးပြုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ယာဉ်များ သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်နေခြင်းကြောင့် နေ့စဉ်ယာဉ်တိုက်မှု နှစ်မှုနီးပါး ပုံမှန်ဖြစ်နေကြောင်း ရဲမှူးကြီး နေ၀င်းက ဆိုသည်။
အရှိန်ထိန်းတိုင်းစက် အလုပ်လုပ်ပုံ (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
လက်ရှိ အဓိကကားလမ်းမကြီးများ၏ မိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်မှာ အမှတ် ၃ လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မိုင် ၆၀ နှုန်း၊ ပြည်လမ်းပေါ်တွင် မိုင် ၄၀ နှုန်း၊ ရန်ကုန် ပဲခူးလမ်းတွင် မိုင် ၆၀ နှုန်း၊ အင်းလျားလမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်တွင် ၃၉ မိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း မော်တော်ယာဉ်အများစုမှာ နေ့စဉ် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် မိုင် ၂၀၊ ၃၀ ကျော် ပိုမိုမောင်းနှင်နေကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလမ်းမကြီးများတွင် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော ယာဉ်အစီးရေမှာ ပျှမ်းမျှ ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ ကြားရှိကြောင်း၊ မဆင်မခြင် မောင်းနှင်မှုကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု သေဆုံးမှုနှင့် ယာဉ်ပျက်စီးမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ ယခုနှစ် ဇွန်လမှ သြဂုတ်လကုန်အထိ ယာဉ်တိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၇၄ ဦး ရှိကြောင်းသိရသည်။
အမြန်လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် အမြန်လမ်းရဲစခန်း ၂၁ ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အသစ်နှစ်ခုကိုလည်း ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်ဟု သိရရှိရသည်။
ko September 6, 2012 - 5:47 pm Welcome to this new.
Reply အာဃာတ September 7, 2012 - 12:47 pm အသင် ပုလိပ် အပေါင်းတို့…. ဖမ်းဆီးမယ့် နေရာကိုလျိူ့ဝှက်ထားပြီး ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ စတင် ကြံစည်မည့်အစား သူများနိုင်ငံမှာ ယာဉ်အန္တရယ်ကင်းအောင် ဒီအရှိန်တိုင်း ကိရိယာတွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာတပ်သလဲဆိုတာလေ့လာပါ။ တွေ့ရတာကတော့ အန္တရယ်ရှိတဲ့ကွေ့ (သို့) လမ်းနေရာတွေမရောက်ခင် ချည်းကပ်လမ်းနေရာတွေ၊ အရှိန်မြှင့် မောင်းနှင်စရာ စွဲဆောင်နေတဲ့ လမ်းအဖြောင့်တွေ မှာတပ်တယ်။ တပ်ထားမှန်း သိအောင်လို့ “Smile Speed camera ahead” ဆိုတဲ့ sign-board တောင် ထောင်ထားပေးသေးတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်က ယာဉ်အန္တရယ်ကင်းဖို့၊ ဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ မဖမ်းရရင် ပိုက်ဆံမရတဲ့ အကြောင်းကြောင့် ထောင်ခြောက်ဆင် ဖမ်းကိုဖမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့ အသင် အမြန်လမ်းပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ စကတည်းက ယဉ်သကိုနဲ့ အခုလူမစည်ကားသေး (မစည်ကားအပ်) တဲ့ လမ်းမဘေးရဲစခန်းတွေမှာ စည်စည်ကားကားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကိုလဲ ဖြစ်စေခြင်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။
Reply tinaungsoe September 8, 2012 - 11:17 am လူကြီးမင်းများ၏အရှိန်ထိန်းကရိယာတပ်ချင်းသည်အလွန်ပင်ကောင်းပါ၏ သို.သော်အမြန်လမ်းပေါ်တွင်စီးနှင်းနေသောဆိုင်ကယ်များ လမ်းဗြောင်းပြန်မောင်းသောဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်များဆောက်လုပ်ရေးထော်လာဂျီများ